MEE XEER ILAALIYAHII QARANKU? SALAADIINTA SOMALILAND WAY JABIYEEN SHARCIGII DOORASHADA! | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
MEE XEER ILAALIYAHII QARANKU? SALAADIINTA SOMALILAND WAY JABIYEEN SHARCIGII DOORASHADA!
Wanaag kasta oon salaadinta ka aamisanayn waxaan filayaa maanta inaynu wada arkayno xad gudubyada faraha badan ay kula kacayaan dalkeena . Hadii ujeedada loo samaystay ay ahay Madax Dhaqameedka ay ahayd inay xaliyaan dhibaatooyinka dhexdeena jiraa ,maanta waxay mushkilad xoog leh ku noqdeen horumarka dawladnimadeena . Hubaal way ka talaaabeen xadkii dhaqameed ee u cayinaa, maadama ay aayaheena siyaasadeed dusha u riteen iyada oon loo idmin . Waanay inqalaabeen haykalkii dawladnimo. Salaadiinta maanta ka taliyaa Somaliland, halkii baarlamanku ka talin jiray. Waxay gaadheen heer ninkii ay doonayan eryaan, ninkay doonayaana keenaan. Maalin kasta waxaan TVyada ka aragnaa rag suldaamo sheeganaya oo siyaasadi waddanka qaada dhigayaa. Mararka qaar u hanjabaya dawladaa ama xisbi mucaarad ah . Markii aan waydiiyay nin ka mid ah Salaadiinta waxaa keenay inay gacan dhaafaan xildhibaanadii soo doortay?
Waxaa igu jawaabay in xildhibanadii ma’suuliyadoodii gabeen. Waa marmarsiiyaha beenta ah ay ku hanteen dalka . Yaab! hadaa waa xildhibaanka kumaananka qof soo dooorteen , baa nin aan cid alaale cid dooratay jirin iska door biday . Mar haday caynkaa tahay, oo xildhibaanka gobalka Awdal laga so doortay ama Togdheer aan lagu kalsoonayn hawshiisa, maxaan iska cadibaynaa oon u dooraynaynaaa baarlamaanka.? Maa Salaadiintaa loo baneeyo Golaha Baarlamaanka?
Faragalintaa salaadiinta waxay canbaar fool xun ku noqatay siyaasadaa Somaliland . Waddamada burbursan ” Failed states ” ka baa lgu yaqaanaa inay talada isku soo jujuubaan dad aan la soo dooran sida ganacsadayaal, wadaado, iyo salaadiin iwm . Ma waxaynu nahay ” Failed state” ? Waa mayaa. Waxaynu nahay dal dhisan oo hayado dawladeed leh . Intaa waxaynu ka qaylinaynaa qabyaalad. Intaa waxaan diidanahay eexda iyo qaraaba kiilka, hadana waxaan awood u siinay oday beeleed wax alaale wax uu ka ogyahay jirin dawladnimo . Maxaa inaga si ah?
Garan maayo sababta dawlada Somaliland indhaha ka qarsatay xad gudubyadaa ay ku kacayaan salaadiintu . Mee xeer ilaaliyaha qaranka ee loo idmaday inuu ilaaliyo sharciga waddankaa marka maalin kasta odayaasha door is moodk ahi ku xad gudbayaan shuruucda dalka. Maalin dhawayto khudbadii Suldaan Xasan ee uu sida beelaysan uga hadlayay Burco waxay ahayd fal dambiyeed toos ah. Waxaa kale oo xadgudub ahaa abaabul beeledka ka dhacay bariga Burco iyo kuwo kale oo ka dhacay galbeedka Burco. . Xeerka Habdhaqanka Xisbiyada Somaliland , oo wada saxeexeen xisbiyada Somaliland waxaa jiraa waxyaabo ka reeban oo dambi ah. Qodobka 9aad, faraqiisa 4 aad, waxaa uu leeyahay sidan, ” Xisbi kasta waxaa ka reeban inuu ku olaleeyo hanaan ku dhisan qabyaalad, kala fogayn….. Waxaa reeban in la abaabulo taageerayaal , olole isku soo bax shir , ku dhisan qabyaalad ama ay ka muuqanayso weedho qabiil ama qabyaaladeed..” Kama damabayntii,waxay u egtahay in damiirku xakamayn waayay salaadiinta Somaliland oo doonayaan inay talada siyaasada gacanta ku qataan, waxaa loo so gaadhay wakhtigii sharcigu xakamayn lahaa.